ဂင်းနစ်ရော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရောမှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း – Sport Gaber
ဂင်းနစ်ရော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရောမှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း
ဂင္းနစ္ေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္အဆင့္ေရာမွတ္တမ္းဝင္သြားတဲ့ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကေ႐ႊေရပုရပိုက္မွတ္တမ္း.
ငပုက ကမာၻ႔ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္သြားသလို…ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း ဂင္းနစ္ေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္အဆင့္ေရာမွတ္တမ္းဝင္သြားပါၿပီ။
ငပုမွတ္တမ္းက ေခြးေရပုရပိုက္ မွတ္တမ္း…
ငပု က ကမာၻမွာ တခါမွမရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ၅ လ သက္တမ္းထိ ဘယ္သူမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ အျပဳမခံရတဲ့ အာဏာသိမ္းတဲ့ အာဏာ႐ူး မွတ္တမ္း….
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက ၂၂၂၂၂ ေန႔မွာ တေန႔တည္း သန္း၃၀ေက်ာ္ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵထြက္ျပတာ အပါအဝင္ …. မိမိ ေသြးအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ လႉဒါန္းပါတယ္ဆိုၿပီး လက္မွာ ပတ္ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵထြက္ျပ ရဲၾကတဲ့ ကမာၻ႔ ပထမဆုံး ရဲရဲေတာက္ ႀကိဳတင္ စီမံ အေသခံ ဆႏၵျပတဲ့ Gen Z ေလးတို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္း….
ယေန႔ထိလည္း လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပၾကဆဲ….
ေနာက္ထပ္က ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လက္သံေျပာင္မႈ တူမီး မွသည္ အဆင့္ဆင့္ တိုးၿပီး ဖြဲ႕လာႏိုင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ရင့္မာလာမႈ မွတ္တမ္း…..
ေနာက္ တခုက EAOs ေတြမွာ ဘယ္သူက တ႐ုတ္ကြၽန္နဲ႔ ငပုကြၽန္ လုပ္ခ်င္တယ္….ဘယ္သူက ဘိန္းကုန္ကူး စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ေလာက္… ဘယ္သူက ဖယ္ဒရယ္ အစစ္အမွန္လိုခ်င္တယ္ …. စသည္ ကြဲကြဲျပားျပား လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားလာေစတဲ့ မွတ္တမ္း….
တကယ္ေတာ့ ဒီေတာ္လွန္ေရးႀကီးဟာ…. ဆန္တျပည္ ထဲမွာ အဖ်င္း ၊ဖြဲ၊ခဲ၊ ဇကြဲ၊စပါးလုံး တခုခ်င္းစီကို ျပာထုတ္ လိုက္တဲ့ ဇေကာတခ်ပ္ နဲ႔ ဆန္ျပာ ျခင္းရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြ…..
အားလုံးၿပီးရင္ ဒီမိုကေရစီ ထမင္းအိုး ဆန္ေကာင္းဆန္သန႔္ေတြနဲ႔ တည္မယ္…။
ငပုက ကမ္ဘာ့ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားသလို…မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်း ဂင်းနစ်ရော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရောမှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီ။
ငပုမှတ်တမ်းက ခွေးရေပုရပိုက် မှတ်တမ်း…
ငပု က ကမ္ဘာမှာ တခါမှမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ၅ လ သက်တမ်းထိ ဘယ်သူမှ တရားဝင် အသိအမှတ် အပြုမခံရတဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့ အာဏာရူး မှတ်တမ်း….
နွေဦးတော်လှန်ရေးက ၂၂၂၂၂ နေ့မှာ တနေ့တည်း သန်း၃၀ကျော် လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒထွက်ပြတာ အပါအဝင် …. မိမိ သွေးအမျိုးအစားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုပြီး လက်မှာ ပတ် လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒထွက်ပြ ရဲကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ရဲရဲတောက် ကြိုတင် စီမံ အသေခံ ဆန္ဒပြတဲ့ Gen Z လေးတို့ရဲ့ မှတ်တမ်း….
ယနေ့ထိလည်း လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြကြဆဲ….
နောက်ထပ်က ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ဖွဲ့တွေရဲ့ လက်သံပြောင်မှု တူမီး မှသည် အဆင့်ဆင့် တိုးပြီး ဖွဲ့လာနိုင်တဲ့ တော်လှန်ရေး ရင့်မာလာမှု မှတ်တမ်း…..
နောက် တခုက EAOs တွေမှာ ဘယ်သူက တရုတ်ကျွန်နဲ့ ငပုကျွန် လုပ်ချင်တယ်….ဘယ်သူက ဘိန်းကုန်ကူး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လောက်… ဘယ်သူက ဖယ်ဒရယ် အစစ်အမှန်လိုချင်တယ် …. စသည် ကွဲကွဲပြားပြား လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားလာစေတဲ့ မှတ်တမ်း….
တကယ်တော့ ဒီတော်လှန်ရေးကြီးဟာ…. ဆန်တပြည် ထဲမှာ အဖျင်း ၊ဖွဲ၊ခဲ၊ ဇကွဲ၊စပါးလုံး တခုချင်းစီကို ပြာထုတ် လိုက်တဲ့ ဇကောတချပ် နဲ့ ဆန်ပြာ ခြင်းရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ…..
အားလုံးပြီးရင် ဒီမိုကရေစီ ထမင်းအိုး ဆန်ကောင်းဆန်သန့်တွေနဲ့ တည်မယ်…။
ကိုဗစ်ကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ရဲမြင့်ကျော်ပြောပြီ
မွေးထားတဲ့မြွေကြီး အစားမစားလို့ ဆေးခန်းသွားပြသောအခါ
တောင်ပို့ “မှို” ဖောက်နည်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ...